सुचना लुकाएको भन्दै टेकु अस्पतालका डाक्टरले दिए जागीर छा’ड्ने चेतावनी – Life Nepali
सुचना लुकाएको भन्दै टेकु अस्पतालका डाक्टरले दिए जागीर छा’ड्ने चेतावनी
काठमाडौँ। सञ्चार माध्यमहरूबाट बुधबार दिउँसो खबर फैलियो– मुलुकभित्रै तेस्रो व्यक्तिमा कोभिड–१९ संक्रमणको पुष्टि । तर अनलाइनहरूमा मुख्य समाचार बनिसक्दासम्म पनि शु’क्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा कार्यरत चिकित्सकलाई मात्र हैन, निर्देशकलाई समेत त्यसबारे पत्तो थिएन । जबकि सं’क्रमित बि’रामी त्यही अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत छन् ।
बिरामीमा कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको सूचना बाहिरिएलगत्तै त्यसबारे बु’झ्न उ’क्त अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीलाई कान्तिपुरले सम्पर्क गर्दा उनले अनभिज्ञता जनाए। ‘हामीले उपचार गरिरहेको बिरामी, हामीलाई नै रिपोर्ट आएको छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ डाक्टरहरू सबैले मलाई कराइरहेका छन्। मैले के जवाफ दिने?’ लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटालाई सम्पर्क गर्दा उनले भने, ‘म पनि विवरण खोज्दै छु, पाएको छैन। आधा घण्टामा कल गर्नुस् न है।’
दुवैको जवाफबाट स्वा’स्थ्य म’न्त्रालयका विभागहरूबीच अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि राम्रो समन्वय नरहेको प्रस्टै बुझिन्थ्यो। मन्त्रालयका यस्तै कमजोरीबीच स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराह्न ४ः१५ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए– एयर अरेबियाको फ्लाइट नम्बर जी–९५३७ मार्फत यूएईबाट आएका व्यक्तिमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखियो। पत्रकार सम्मेलनमा उनले अब सबै संयन्त्र ‘चेन अफ कमान्ड’ का आधारमा चल्ने र त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने पनि बताए।
चिकित्सकहरूले भने संक्रमित व्यक्तिबारे मन्त्रालयले १४ घण्टाभन्दा बढी सूचना लुकाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। ‘ती व्यक्ति संक्रमित रहेको कुरा हिजो (मंगलबार) राति नै मन्त्रालयलगायतलाई थाहा रहेछ, तर हामी उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बुधबार साँझ मात्र सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौं,’ टेकु अस्पतालका डा. राजेश साहले भने, ‘बिरामीको उपचारमा सं’लग्न चिकित्साकर्मीसँग संक्रमणको स्थिति लुकाउँदा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था छ।’
टेकु अस्पतालका चिकित्साकर्मीले बुधबारै आफ्ना निर्देशक डा. राजभण्डारीलाई भेटेर बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लुकाउने काम भए उपचार प्रक्रिया नै छोड्ने चेतावनी दिएका छन्। जवाफमा डा. भण्डारीले आफूलाई पनि ती बिरामी संक्रमित रहेको जानकारी न’रहेको चिकित्साकर्मीहरूलाई बताएका थिए। ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कुनै व्यक्तिको कोभिड–१९ रि’पोर्ट पोजेटिभ आउनेबित्तिकै इपिडिमियोलजी तथा रो’ग नि’यन्त्रण महाशाखालाई जानकारी दिनुपर्ने हो।
त्यसले तुरन्तै हामीलाई सूचित गर्नुपर्ने हो,’ डा. राजभण्डारीले भने। तर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ देखिएको रिपोर्ट अस्पताललाई नदिई सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउन लगाइँदा यसअघि पनि यस्तै समस्या देखिएको उनले जनाए। पहिलो कोरोना संक्रमितबारेको जानकारी पनि हङकङको प्रयोगशालाबाट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आएको २४ घण्टापछि मात्र स्वास्थ्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेका थिए।
अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डका आधारमा प्रयोग गर्ने हो भने अहिले मौज्दात पीपीईले दुई/तीन दिन धान्न पनि मुस्किल छ। ‘अहिले त खासमा चिकित्सकहरूले मात्रै प्रयोग गरिरहेका छौं। भोलि बिरामी बढेको खण्डमा अरू स्टाफहरूका लागि पनि पीपीई चाहिन्छ, त्यस्तोमा कसरी व्यवस्था हुन्छ भनेर चिन्तित छौं,’ उनले भने। स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले भने पीपीई मन्त्रालयमा रहेको बताए। ‘हामीसँग मन्त्रालयमा अझै पनि स्टक छ। त्यो अपुग होला, तर हामीले थप व्यवस्था गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आउनेबित्तिकै आवश्यक सबै स्थानमा पठाउँछौं।’
Previous कोरोना त्रास : घर बाहिर निस्कनेलाई उर्लाबारीमा मेयरको भाटे का’र्बाही
Next काठमाडौं महानगरले किटनाशक औषधी छर्किने कार्यलाई आज पनि निरन्तरता दिँदै”